Microsoft Office Professional 2003. - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Microsoft Office Professional 2003.
Microsoft Office Professional 2003 ရှိရင် မစကြပါ ။
ပို့စ် 34 ခုအတွက် 83 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Microsoft Office Professional 2003.
ကို "Wahgyi" ခင်ဗျာ။
Office 2003 Proff Edition ကို အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ။ 72 MB ပဲရှိပါတယ်။ Self-Extract Set Up လို့တော့ပြောတယ်။ ကျွန်တော် မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။ Portable Version ဖြစ်နေရင် ပြောပါ။ ကျွန်တော် ထပ်တင်ပေးပါမယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်တော. PC မှာတင်ထားတဲ့ ဟာ ဘယ်မှာသိမ်း မိမှန်း မသိတော့လို့။
Last edited by tu tu; 26-10-2011 at 01:54 PM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Min Maung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပဲပြုတ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖယောင်း, ယုဇနမောင်, akstar
Min Maung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Min Maung
Portable version ဟုတ်မဟုတ်တော့ နားမလည်လို့ မသိပါဘူး ။ Serial တွေ ဘာတွေတော့ ဘာမှ ရိုက်စရာမလိုဘူး ။ အခုတော့စသုံးနေပါပြီ ။ အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြန်စာ - Microsoft Windows XP Service Pack2( No Serial Needed )
MS office 2003 လိုချင်ပါတယ်ရှင်....
Find More Posts by kyarphyu
ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါ။ တင်ပေးထားပြီးသား ရှိပါတယ်။
MS office မှာ MS Access ပါမလာဘူး...။ ရှိခဲ့ရင် .. ရှယ်ပေးပါအုံးပါအုံးနော့...။
အစကတည်းက သေသေချာချာ ထည့်ပါဆို
application များလိုလျင် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တောင်းရမှာထင်တယ်
ရှာရန် ဆိုတဲ့ခေါင်စဉ် မှာ Microsoft office လို့ ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ရင်
[SIZE="3"][B][COLOR="Red"]သစ္စာတရား[/COLOR] ၊ [COLOR="Green"]အမှန်တရား၊ နှင[/COLOR]့် [COLOR="Blue"]လွတ်လပ်ခြင်း[/COLOR][/B][/SIZE]
Microsoft Access 2003 လိုချင်ပါတယ်ရှင်....။ မနေ.က ပိုစ်ထားသေးတယ်...ဘယ်သူ delete လိုက်လဲမသိဘူး ...
Last edited by kyarphyu; 08-07-2008 at 07:42 PM..
delete လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ကြာဖြူရေ...
နေရာမှားနေလို့ ဒီကိုရွှေ့လိုက်တာပါ။ ပို့စ်နံပါတ်(၆)မှာလေ။
အခုပြည့်စုံတင်ပေးထားတဲ့ access 2007 ရောအဆင်မပြေဘူးလား။
sorry naw တုတု ရေ .... ရသွားပါပြီ...။ကျေးဇူးပါ...။
ဒီမှာ မွေကိုက်ပြန်ပြီ ..... စစ်ရေ ကျောင်းကစက်တွေက ၂၀၀၀ နဲ.၂၀၀၃ တွေသုံးတော. အဆင်မပြေဘူး...။ ၂၀၀၃ တွေရမယ်ဆိုရင်.... ကျေးဇူး..အတိုင်းထက်အလွန်
ပို့စ် 152 ခုအတွက် 456 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မမြင်ရင်လည်း ဒီလင့်သာ နှိပ်လိုက်တော့
Everything happens for the best.. :83:
Last edited by pph; 09-07-2008 at 01:57 PM..
I already DL that not include MS Access .
MS office ဆိုမှတော့ access မပါဘူးဆိုတာ ရှိပါ့မလားကွယ်
2003 လိုအပ်နေသူများ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကီးကလည်း အလုပ်လုပ်ပါသေးတယ်။ Office 2007 Enterprise ကိုလိုအပ်ရင် ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်။
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 37 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
no.6file မရလို့ကူညီပါဦး။
Last edited by tu tu; 07-09-2008 at 10:12 AM..
Find More Posts by mykyaw
၂၀၀၃ ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်တော့ product key တောင်းနေပါတယ်။ product key ရနိုင်အုံးမလား ရှင်..။
ဒါကတော့ ကျနော် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကီးပါ ...
Last edited by sawjonnie; 10-09-2008 at 02:00 AM..
ကိုပြည့်စုံ ဒီကောင်လေးကို တချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါလား။ ဖိုင်း နံပတ်တစ်ရာ် ပတ်စ၀က်လေးရယ်။
အကောင်လိုက်မြိုတာ အမြီးရောက်မှ တစ်နေသလိုပဲ
Last edited by Aung Aung; 27-10-2008 at 08:29 AM.. Reason: quote ပြင်ရန်
28-10-2008, 08:27 AM
ဗျို့ မမတူး တို့ ကိုကိုဆုံးတို့ ကိုကိုစောတို့ရေ
မိုက်ခရိုဆော့လေးကို မြိုထားတာ အမြီးမှလာတစ်နေလို့ ဖိုင်နံပတ်တစ်လေးရယ် ပတ်စ၀က်လေးရယ် ကြည့်ပေးပါအုန်း
ဘယ်အမြီးမှ မတစ်ပါဘူး ညီခရေ...
ဖိုင်နံပါတ်(၁)လည်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါဦး။ မရရင်ပြန်ပြောပါ။
password လည်း မှန်ပါတယ်။ အကုန်ဒေါင်းပြီး ဖြည်ကြည့်ပြီးပါပြီ။
ifile က အပြိုင်ဆွဲရင် တခါတလေ အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခဏစောင့်ပြီး ပြန်ဒေါင်းရင် ရပါတယ်။
Microsoft Office ၂၀၀၀ နဲ.၂၀၀၃ တစ်ခုခုက portable version လေးများရှိရင် လိုချင်ပါတယ်ဗျာ။
Find More Posts by comic_
ပို့စ်7ခုအတွက်7ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ခMicrosoft Office Professional 2003.
Microsoft Office Professional 2003 ပြန်တင်ပေးကြပါလား။ တင်ထားတာတွေက file expired ဖြစ်နေလို့ပါ။
:6: :27: :17:
" You cannot stop the birds flying overhead but you can stop them from making nests in your hair " ......... By Sayadaw U Jawtika
Find More Posts by ညီလေး
file size သေးတဲ့ ကိုမင်းမောင်တင်ထားပေးတဲ့ office 2003 ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
HJ-Split နဲ့ ပြန်ဆက်ကြည့်ပါ။
Microsoft Office 2007 ကိုဘဲအားလုံးဆွေးနွေးနေကြတာ. update တော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Microsoft Office 2003 လောက်တော့ အဆင်မပြေသေးဘူးထင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့Microsoft Office 2003 ဘဲသုံးချင်လို့ ပါ။
ဒါပေမယ့် Microsoft Office 2003 ကိုတော့ ဘယ်လိုဒေါင်းရမယ်ဆိုတာ မတွေ့ မိပါလား
ဒေါင်းလို့ ရမယ့်နေရာရှိရင် ညွှန်ပေးကြပါဦး.။
Last edited by nyinyi mt; 30-08-2009 at 08:29 AM..
30-08-2009, 09:44 AM
Microsoft office 2003 full with service pack 3ပါ
Last edited by Aung Aung; 30-08-2009 at 09:45 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, pyaeမွန်, tu tu
Microsoft Excel 2003 တစ်ခုပဲ လိုချင်လို့ပါ။ တင်ပေးပါခင်ဗျ။ ..................................................
Microsoft Excel 2003 က တစ်ခုထဲတော့ မရှိလို့....
ညီမလေးဆီမှာလည်း Upload လုပ်မရလို့..
Excel File Viewer ဒေါင်းလို့ရမယ့် လင့်ခ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
Excel File Viewer က Excel File တွေဖွင့်လို့ရတယ်၊ ကြည့်လို့ရတယ်၊ Print လုပ်လို့ရတယ်။
Excel 2003 ရရင် ပို့စ်လုပ်ပေးပါမယ်။
Last edited by chitnyimalay; 03-09-2009 at 07:01 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ chitnyimalay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖူးလေး, arkaraung, Aung Aung, AZM
Beginning Java SE6Platform: From Novice to Professional kothu E-books မျာ6း23-12-2014 12:18 PM
Microsoft Office 2007 ဂျစ်တူး Applications 69 23-02-2012 12:55 AM